ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ရုံးတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အဖွဲ့၀င်များနဲ့ ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်မလဲ? | Mycanvas
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ရုံးတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အဖွဲ့၀င်များနဲ့ ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်မလဲ?
မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်မှုကိုတိုင်းတာခြင်း (တနင်္လာနေ့ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြပြီး) ပြီးနောက် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်းကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရန် ခေါင်းဆောင်နဲ့မန်နေဂျာတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိကိုလည်း အာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန်မလွယ်ကူပါဘူး။ ၀န်ထမ်းများဟာ မိမိတို့ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေရာမှာ အခက်အခဲများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့၀င်များရဲ့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျမှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့် ‘စာနာမှုဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှု’ ဆိုတာဟာ အလွန်ထိရောက်ပါတယ်။
Point #1 အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အကြောင်းကိုသိပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟာအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုအပြုသဘောဖြင့်သိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ :
မိမိရဲ့ အဖွဲ့ဝင်မှာ ကလေးရှိသလား? ရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ?
မိမိရဲ့ အဖွဲ့ဝင်မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာ၊ ဝါသနာတွေရှိသလား?
မိမိရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းကို အတွင်းကျကျသိထားခြင်းဟာလည်း ထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။ ဥပမာ – အဖွဲ့ဝင်တွေမှာ ကလေးရှိတယ်ဆိုပါက ကလေးတွေမှာ COVID-19 နှင့်အလားတူလက္ခဏာရှိလျှင်ကလေးများရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ သင်ဟာသင့်အဖွဲ့ဝင်ကို စိတ်ဓါတ်မကျအောင်အားတင်းထားဖို့ ကူညီဖေးမရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဝန်ထမ်းရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပြန်လည်တက်လာအောင်လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့လည်းဆက်စပ်နေပါတယ်။
Point #2 နေကောင်းရဲ့လား? ဘယ်လိုနေလဲ? လို့မေးပါ
“နေကောင်းလား?” ဆိုတဲ့စကားဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ ယဉ်ကျေးမှုအရပြောတဲ့စကားဖြစ်ပေမယ့်လည်း အဖွဲ့ဝင်များရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ရန် အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ စကားပြောဖို့လူတစ်ယောက်လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားထောင်ပေးပြီး တခြားသူတွေကိုပြန်မပြောဖို့ပဲလိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ကိုယ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဆီက ရင်ဖွင့်စကားကြားရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တချို့လူတွေဟာသူတို့ခံစားချက်တွေနဲ့ သူတို့ပြောချင်တာတွေအတွက်ပြောရမယ်စကားတွေကိုစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှပြောတတ်ကြလို့ပါ။ သူတို့ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုတောင်သင်လက်ခံပြီးအား‌ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်သင်ရဲ့ခံစားချက်များကိုလည်း သင့်ရဲ့အသင်း၀င်များနဲ့ ဝေမျှပြီပြောပြနိုင်ပါတယ်။
Point #3 အဖွဲ့၀င်တွေဘာလိုတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါ
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်များကို သင်လုပ်စေချင်တာကိုလုပ်ဖို့ထက် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သူတို့လိုအပ်တာတစ်ခုခုကိုကူညီပေးသင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်အခြားသူများအတွက် သင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟာမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုမေ့ထားပြီး အဖွဲ့ဝင်များကခေါင်းဆောင်အားဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုတာကိုဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ပထမအချက် ၂ ချက်ဟာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာသင်လိုက်လံလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။